Toerana tsara indrindra ao Shina, mba Hihaona tokan-tena marina Tokoa Shinoa Bilaogy
Fantatsika fa ny iray amin’ireo antony mahatonga eto ianao sy ny famakiana ity lahatsoratra ity, satria te-hihaona Shinoa tokan-tena fotsiny, fa tsy fantatro ny toerana tsara indrindra mba hijery. Shina azo antoka firenena iray goavana ary mitady ho tokan-tena tsy misy mamaky ity lahatsoratra ity dia manome anao ny tsara tarehy fotoana sarotra sy mampihena ny hahita mifanaraka Shinoa tokan-tena avy hatrany. Ka vao mijanona eo amin’ny seza sy miala voly amin’ny fitadiavana izay afaka hihaona tokan-tena any Shina. Amin’ny mampiraikiraiky mponina tapitrisa ny olona, Shanghai no natao ho toy ny iray amin’ireo tanàna be mponina indrindra ao Shina. Ny maha-ao amin’ny foibe ao amin’ny firenena ny fandraharahana sy ny varotra, ny tokan-tena maro dia ny fianarana sy ny asa eto mba hitady fiainana tsaratsara kokoa ny fahafahana. Ao Shanghai, misy marina ny toerana antsoina hoe Shanghai Kianja Tsena izay tsena eo amin’ny Olona ny Valan-javaboahary izay ray aman-dreny tokan-tena mahazo ny hizara ny vaovao mikasika ny ankizy mba mety hahita mpiara-miasa ho azy ireo. Izany no mitranga isaky ny sabotsy sy alahady ho avy NN ho PM. Fa ny vahiny mety manana vintana kely ny fitadiavana ny lalao eto satria ny ankamaroan’ny ray aman-dreny Shinoa dia tia ny zanany vavy hanambady Sinoa-pirenena. Mbola misy ny tena toerana vitsivitsy ao Shanghai izay afaka hihaona tokan-tena. Fa ao amin’ny tanàn-dehibe, ianao ankamaroany hihaona ankizivavy izay dia ho tsotsotra mampiaraka fa tsy noho ny fifandraisana maharitra. Amin’ny Shanghai maha urbanized tanàna, vehivavy tsy dia matetika no maka ny fomba tandrefana, asa-mirona, ary ianao koa efa maro loatra ny fifaninanana amin’ny hafa ny vahiny. Fa na dia izany aza, ny toerana lehibe mba hihaona Shanghai tokan-tena. Ny maha-ao Shina renivohitra sy ny iray amin’ny firenena lehibe indrindra ao amin’ny tanàn-dehibe, ny Beijing dia tanàna feno hery sy ny olona. An-tanàna no misy akaikin’ny Bohai Gulf, faritra Avaratra-atsinanan’i Chine. Na dia tsy amin’ny maha-mponina araka ny Shanghai, i Beijing dia mbola hugely tanàna be olona amin’ny tapitrisa.
Raha mbola ianao mahalala ny toerana hitadiavana. Tahaka Shanghai, ny ankamaroan’ny olona, indrindra fa ny vehivavy, ny tonga ho an’i Beijing mba hitady asa fahafahana noho ny ao an-tranony an-tanàna. Satria ny tanàna dia urbanized ary matetika nitsidika ny vahiny Beijing, any shina, ny vehivavy dia misokatra kokoa ny mampiaraka azy ireo satria izy ireo dia saika nahita azy ireo isan’andro. Raha oharina amin’ny hafa, ry zareo kokoa ny malala-tsaina, dia nidina tety an-tany, ary ho amin’ny fahafinaretana. Ny tanànan’i Chengdu dia hita ao amin’ny Pearl River Delta ao Atsimo-atsinanan’i Shina sy amin’ny mponina tapitrisa ny olona, ny tanàna dia mangina sy tony kokoa raha oharina megacities toy Shanghai sy i Beijing. Ny aina haingana ihany koa noho ny zava-misy fa an-tanàna no misy ao amin’ny faritra be tendrombohitra. Chengdu dia fantatra ao Shina fa manana vehivavy tsara tarehy indrindra. Amin’ny ny Sinoa ny olona ny fanevan ny hatsaran-tarehy tahaka ny tsininy fotsy hoditra sy fotsiny hoe hatsaran-tarehy voajanahary, Chengdu vehivavy tena aced ao amin’ny fizarana ireo. Vehivavy shinoa avy any Chengdu dia fantatra ihany koa mahery ary dia tapa-kevitra raha oharina amin’ny hafa. Tsara tarehy izy ireo, saingy tsy azo antoka aza ny fitiavana ny sakafo masiaka izay mety ho kely sarotra ho anao ianao, raha tsy tia ny chilis. Na dia Chengdu dia tsy urbanized, mbola misy toerana izay afaka mitsidika amin’ny alina izay afaka hihaona tokan-tena.
Eto ny lisitra
Rehefa manatona Chengdu ankizivavy, zava-dehibe izany mba ho sahy, mahalala fomba, ary matoky. Misy vehivavy iray te daty olona iray izay fanta-mahalala fomba sy dia matoky ny tenany. Miorina ao amin’ny Pearl River Delta ny Atsimo atsinanan’i Shina dia ny tananan’i Guangzhou. Tanàna fahatelo lehibe indrindra ao Shina, dia olona eo ho eo tapitrisa ny olona, ary dia fantatra amin’ny maha-orinasa mpamokatra entana fototra any Shina. Saingy mazava ho azy, misy fomba hafa ny zavatra mahaliana momba ny Guangzhou, ary izay no be dia be ny mahagaga cuisinés ary ny tena tsara tarehy amin’ny vehivavy. Ao Guangzhou, dia afaka hihaona Shinoa tokan-tena saika na aiza na aiza, fa ianao indrindra mahita azy ireo ao amin’ny: — Birao tilikambo sy ny trano fandraisam-Bahiny — afaka mahita birao mahaleo tena ny vehivavy avy ireo toerana. Ny ankamaroany manodidina sakafo atoandro ny fotoana sy ny eny-miasa in. Trano fisotroana sy trano fisotroana kafe — dia ny Ho fantatra ho toy ny»Tanàna ny Alina Fiainana», maro ireo malaza amin’ny trano fisotroana sy trano fisotroana kafe afaka handeha hitsena ny vehivavy tokan-tena. Afaka mahita trano fisotroana sy trano fisotroana kafe miaraka Haunch Dong-Dalana, Jian izy Liu-Dalana, Tajin-Dalana, Drano Yanjing Zhong-Dalana, sy ny maro hafa. Trano fisakafoanana — trano Fisakafoanana ao Guangzhou izay manompo tsara ny sakafo ary tsara ny ambiance afaka misarika ny olona maro, anisan’izany ny tokan-tena sy ny mpifindra monina avy any faritra samy hafa any Shina. Te ho gaga ianao fa tsy afa-mahita tsara ny sakafo ihany, fa tsara tarehy ny vehivavy. Malaza toy ny trano fisakafoanana Dong Bei Ren, Zinging, Mao Jia Wan, Fanomezana Tu Kaiyuan ny sasany amin’ireo olo-malaza ao Guangzhou. Oniversite — Rehefa mandeha ny oniversite ao Guangzhou, dia ho hitanao ny manan-tsaina, dia velona, ary ny fisainana ankizivavy. Ho an’ity farany, ny toerana, dia tsy maintsy mandeha amin’ny lalana rehetra i Shina vao mba hihaona tokan-tena dia avy ao Shanghai, Beijing, Chengdu, ary Guangzhou. Fotsiny sonia ny ho kaonty ao amin’ny Shinoa mampiaraka toerana na ny fampiharana toy ny Tena Sinoa, fenoy izany ny fanazavana, avy eo dia manomboka mikaroka ny tokan-tena eo amin’ny toerana manokana izay tianao. Izany dia tanteraka ihany koa ny mety raha toa ianao efa tao Shina, ary te-hahita haingana olona mifanerasera aminy. Ny fampiharana dia fitaovana ihany koa amin’ny hafatra translation endri-javatra mamela anao hampiasa teny rehetra izay tia sy ny fandikana izany ho amin’ny fiteny fa ny olona hafa no hahazo aina. Fa raha ianao efa any Shina sy ny momba ny hihaona olona misy, ho azo antoka izy ireo fa miteny ny teny anglisy mba hisorohana ny ady sy ny miscommunications. Shina dia firenena iray goavana ary afaka saika hitsena Shinoa tokan-tena na aiza na aiza. Fa arakaraka ny fiarahana tiany, ary inona no toetra tianao ho mpiara-miasa dia tanteraka miankina amin’ny toerana misy anao dia tokony hijery ny hihaona sy ny daty Shinoa tokan-tena
← Ahoana no hivory hiaraka ny lehilahy iray. Soso-kevitra mifototra amin'ny zavatra niainany manokana
Shinoa Tanora - Matahotra ny Ho ao amin'ny Fifandraisana Matotra Elaine Dai →